100 Kununurwa Munamato Kubva Kune Njodzi Zvibvumirano | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 100 Kununurwa Munamato Kubva Kune Njodzi Zvibvumirano
100 Kununurwa Munamato Kubva Kune Njodzi Zvibvumirano
Isaya 49: 24-26:
24 Ko iye ungabvisirwa zvakapambwa kuna vane simba, Kana nhapwa yomutemo inganunurwa? 25 Asi zvanzi naIshe, Kunyange navarwi veanesimba vachatorerwa, zvakapambwa zveanotyisa zvichadzikunurwa, nekuti ini ndichapokana naiye anokwaka newe, uye ndichaponesa vana vako. 26 Zvino ndichadyisa vanokumanikidza nenyama yavo; uye vachadhakwa neropa ravo, sewaini inotapira. uye vanhu vese vachaziva kuti ini Ishe ndiri Muponesi wako, Mudzikunuri wako, une simba waJakobho.
Nhasi munamato wekuununura inorehwa kune avo vanobatwa chibvumirano chine njodzi. Sungano chibvumirano chinosungwa pakati pevanhu vaviri kana kupfuura vanhu maererano nemamwe mazwi nemamiriro. Zvibvumirano zvinogona kuita transential, kuti zvinogona kukanganisa vanhu vakasiyana kubva chizvarwa kuenda kune chimwe chizvarwa. Vanhu vazhinji vari pasi pehutapwa hwadhiyabhori nhasi nekuda kwezvibvumirano zvakashata zvakaitwa nemadzitateguru aya nemadhimoni muchimiro chekunamata zvidhori. Kamwe chibvumirano chakasungwa, chinogona chete kuputswa nesungano yakakwirira. Nhasi tichave tichiita munamato wekununura zana kubva kuzvibvumirano zvine ngozi. Izvi zvibvumirano zvine njodzi zvibvumirano zvechidhimoni, rakagadzirwa naDhiabhori zvimwe, nesu, vabereki vedu kana vedu madzitateguru. Iyi zvibvumirano yakatiita varanda vevadhiabhori nemadhimoni ake. Nzira chete yekuzvisunungura kubva pane izvi zvibvumirano ndechokutanga nekuzvarwa patsva uye nekuita simba remunamato wekununurwa.
Obhadhiya 1:17, inotiudza kuti pagomo reZioni, pachava nokununurwa uye vanakomana vaJakobho vachatora nhaka. Tinofanira kunzwisisa kuti kana tichifanira kuona kufambira mberi muhupenyu hwedu uye nemhuri, tinofanira kuitora nechisimba, simba remunamato rekununura. Hazvina kukwana kuti uzvarwe patsva, kana uchizorarama hupenyu hwokukunda hwakagadzirirwa Kristu naiye, unofanira kunge uri murume kana mukadzi wemunamato. Iwe unofanirwa kuve uchipa kune minyengetero isingachinjiki, kunyanya munamato wekukununura. Hapana chekapfupika, kununurwa kubva kuna dhiyabheti, yake ungave uri pamoto kana kwete, its angave uri kupisa kana kwete. Munamato ndiyo inoita kuti hupenyu hwako huve hwakanyanya kupisa kuti Dhiabhori abate.
Mwana wa Mwari, ini handina basa nezvibvumirano zvakashata zviri kurwisa hupenyu hwako nhasi, kungave hurombo, kurwara, kushaya mbereko, chikwereti, kudzvinyirira madhimoni, zvivi uye kupindwa muropa, rombo rakaipa, danho rekubudirira, kunyara uye nyadzi, kunonoka kwewanano. etc nhasi paunosimuka uchinamata iyi minamato yekununurwa, ndiri kuona Mwari wekudenga achiparadza izvo zvibvumirano zvakaipa muzita raJesu. Teerera, iwe unofanirwa kutora iyi minamato zvakanyanya. Kune vamwe vanhu vakasvikirwa nemadzitateguru ipapo izvo sechibayiro kuzvifananidzo zvavo, semugumisiro weizvozvo, hapana munhu anobudirira mumhuri iyoyo, dzimwe mhuri dzavakapika kuti hapana mukadzi acharoora mumhuri iyoyo, vakatsaurira vanhukadzi kuti kuna vamwari, semhedzisiro, hapana mukadzi, kunyangwe akaroora sei mumhuri, idzi mhedzisiro yezvibvumirano zvine njodzi, asi nhau yakanaka ndeiyi, hapana chibvumirano chinopfuura chesungano itsva yatinayo muna Kristu Jesu, kana iwe Wakazvarwa patsva uri musungano itsva iyi uye munamato wekukununura unoshanda mumawoko ako semoto asi kana usiri kuberekwa patsva pano kuponeswa, usati wanamata uyu munamato wekununurwa. Ini ndinokuzivisa nhasi, kuti kusuwa kwako kese kwapera muzita raJesu. Ramba wakaropafadzwa
1. Ini ndinotora, zvese zvikonzero zvakapihwa satan nemadzitateguru angu, muzita raJesu.
2. Ndinokutuka mweya uchisimbisa zvisungo zvakaipa muhupenyu hwangu uye ndinokuraira kuti undisunungure, muzita raJesu. (Paunenge wataura izvi katatu, tanga kuti, 'Ndisunungure', muzita raJesu).
3. Zvese zvakatamiswa muhupenyu hwangu nekuiswa kwemadhimoni maoko, sunungura chako izvozvi, muzita raJesu.
4. Yese yenyoka muchetura yakaiswa muhupenyu hwangu, ibuda zvino, muzita raJesu. Ndinokufuridza neropa raJesu.
5. O Ishe, moto ngawire pamusoro pemweya wega wega werufu uye gehena, rakagadzirirwa hupenyu hwangu, muzita raJesu.
6. Ini ndinotyora musoro nekupwanya muswe wemweya wenyoka wese, muzita raJesu.
7. Iwe bheya remweya uye bundu remweya rakaiswa mumusoro mangu, gamuchira moto waMwari, muzita ra. Jesu.
8. Munondo wemoto, tanga kugura zvese zvakashata zvinosanganiswa nevabereki, muzita rakasimba raJesu.
9. Baba Ishe, ndizarurire ini chero sungano yakavanzika yandinga rongerwe nadhiyabhori muzita raJesu.
10. Muti wese, iwo usina kudyarwa na Baba muhupenyu hwangu, unokudzwa, muzita raJesu.
11. Baba Ishe, ini ndinoshongedza ivhu renzvimbo ino izvozvi uye itai kuti sungano yese nemakumbo itange kupwanya izvozvi, muzita raJesu.
12. Rega zvakaipa zvese zvakavanzika, zvityore, muzita rakasimba raJesu.
13. Ini ndinoisa ropa raJesu kupwanya kutukwa kose.
14. Imba rwiyo urwu: "Kune simba iropa muropa (x2). Kune simba rakasimba muropa raJesu Kristu. Kune simba rakakura muropa. "
15. Ini ndinoisa ropa raJesu kupwanya zvese zvakakanganiswa nezvivi zvevabereki.
16. Ishe, shandurai zvakaipa zvese zvakandisundira, kuti zvive zvakanaka.
17. Masimba ese ezvakaipa, anongedzwa pandiri, dzoka zvakananga kune wako anotumira, muzita raJesu.
18. O Mwari, itai kuti zvese zvataurwa nemuvengi zvikundikane muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
19. Ini ndinozvisunungura kubva ambule yekusungwa kwese kwakaunganidzwa, muzita raJesu.
20. Ini ndinozvisunungura kubva kune chero nhaka yakagarwa nhaka, muzita raJesu.
21. Ishe, tumai chemberi yemoto kunheyo yehupenyu hwangu uye paradzai zvakashata zvese zvirimo.
22. Ropa raJesu, buda kunze kwema system angu, zvese zvakagarwa nhaka satanic, muzita raJesu.
23. Ini ndinozvisunungura kubva mukubatwa kwechinetso chipi zvacho, chinotamiswa muhupenyu hwangu kubva mudumbu, muzita raJesu.
24. Ropa raJesu nemoto weMweya, suka nhengo dzese dziri mumuviri wangu, muzita raJesu.
25. Ini ndinorega pasungano dzese dzakaipa, muzita ra
26. Ini ndinorega kubva pakutukwa kwese pamwe chete, muzita raJesu.
27. Ini ndinosuka zvese zvakaipa zvikafu zvandakapihwa semwana mudiki, muzita raJesu.
28. Vatungamiriri vese venhema, vakasungirirwa pahupenyu hwangu, vakaremara mitezo, muzita raJesu.
29. Chero tsvimbo yevakaipa, inosimuka kurwisa mhuri yangu, ishandiswe simba nekuda kwangu, muzita raJesu.
30. Ndinodzima mhedzisiro yezita ripi neripi rakaipa renzvimbo, rakanamatira munhu wangu, muzita raJesu.
31. Namata nehasha uchirwa nemidzi inotevera yekutapwa. Namata seizvi: Zvese zveSezviro zveDhimoni pane hupenyu hwangu, buda nemidzi yako yese, muzita raJesu.
32. Ini ndinoramba kumwa kubva kutsime rekusuwa, muzita raJesu.
33. Ini ndinotora simba pamusoro pekutukwa kese kwakataurwa pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.
34. Kumbira Mwari kuti abvise chero kutuka kwaakaisa paupenyu hwako nekuda kwekusateerera.
35. Chero dhimoni, rakanamatira pane chero rushambwa, ibva kwandiri ikozvino, muzita rakasimba raIshe wedu Jesu Kristu.
36. Kutuka kese, kwakapihwa pandiri, kushandurwa kuve maropafadzo, muzita raJesu.
37. Kutuka kwese kwehurwere hwepfungwa uye hwemuviri Ini Ndinozivisa !!!, "kuputsa, kuputsa, kupwanya, muzita raJesu. Ndinozvisunungura kubva kwauri, muzita raJesu. "
38. Hapachazovipozve hurombo, kurwara, nezvimwewo muhupenyu hwangu, muzita raJesu. "
39. Ndinozvisunungura kubva muhusungwa hweatari dzakaipa, muzita raJesu. Taura izvi kamwe, wobva wadzokorora, "Ini ndazvisunungura, muzita raJesu." Pedza nguva pane izvi.
40. Ini ndinosuka muchetete wese wa satan wandakamedza, muzita raJesu.
41. Ndinodzima kuzvipirwa kwese kwamadhimoni, muzita raJesu. Idzokorore, "Ndinokudzima, muzita raJesu."
42. (Isa maoko ako maviri mumusoro wako.) Ini ndinotyora yese, simba rakaipa pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu. Idzokorora, "Ini ndinokuvhuvhu, muzita raJesu."
43. Chiremera chose chakashata chemhuri kana chidhori, ndinokuzivisa kuti "Pwanya, muzita raJesu." Dzokorora kanomwe zvinopisa.
44. Wese muridzi weakaipa mutoro, takura mutoro wako, muzita raJesu. (Kana chiri chirwere kana rombo rakaipa, vaitei.)
45. Ini ndinopa chero yeatari ine hasha isina simba, muzita raJesu.
46. ​​Atari yese yakaipa, yakavakirwa kwandiri, nyadziswa muzita raJesu.
47. Chero chipi zvacho chakaitwa chinopesana nehupenyu hwangu pasi pekuzodzwa nemadhimoni, chinzwa muzita raJesu.
48. Ini ndinotuka aritari yega yega, yakagadzirirwa kundirwisa, muzita raJesu.
49. Iwe nyundo yoWamasimba Ose Mwari, pwanyai aritari yese yakaipa yakavakirwa kwandiri, muzita raJesu.
50. O Ishe, tumai moto wako kuti uparadze huipi hwese hwakasangana neni, muzita raJesu.
51. Mupristi wese akaipa, achindishandira paatari yakaipa, gamuchira iro pfumo raMwari, muzita raJesu.
52. Iwe unotinhira zvaMwari, rova ​​mupristi wese akaipa anoshanda pandiri paatari yakaipa uye uzvipisa nemadota, muzita raJesu.
53. Mupristi wese wa satanic, unoshumirwa neni pamusoro peatari dzakaipa, unowira pasi uye unofa, muzita raJesu.
54. Chero ruoko rwuri kuda kutsiva kana kundisunga nekuda kweminamato iyi yese yandiri kunyengetera, pukuta uye woma, muzita raJesu.
55. Wese akasindimara akaipa atari, inwa ropa rako, muzita raJesu.
56. Ini ndine yangu, yakabiwa neatari yakaipa, muzita raJesu.
57. Ndinobvisa zita rangu kubva kuatari yese yakaipa, muzita raJesu.
58. (Tambanudzira ruoko pachipfuva chako.) Ndinobvisa maropafadzo angu, kubva kuatari yese yakaipa, muzita raJesu.
59. (Tambanudza ruoko kumusoro wako.) Ini ndinobvisa mabhurukwa angu kubva kuatari yeipi yakaipa, muzita raJesu.
60. Ndinobvisa mbiri yangu kubva kuatari yese yakaipa, muzita raJesu.
61. (Tambanudzira ruoko pachipfuva chako.) Ini ndinobvisa budiriro yangu kubva kuatari yeipi yakaipa, muzita raJesu.
62. (Ruoko rumwe mumusoro, rwumwe pachipfuva.)
63. Taura nhengo yaunoziva kuti haisi kuita nenzira yainofanira kuita. Paunenge waita izvi tanga kuti: "Ini ndinokubvisai paaritari yese yakaipa." Iti izvi zvinomwe zvinopisa.
64. Isa ruoko rumwe mumusoro uye rumwe padumbu. Yese minamato yekuramba zvibvumirano, ingave yekuziva kana kusaziva yakapinda inofanirwa kutaurwa zvinehasha, zvine simba uye zvine ruzha nekuti unogona kunge uchirwa hondo ine makore zviuru zviviri. Bhaibheri rinoti, "Vanhu vangu vaparadzwa nekushaiwa zivo" (Hosiya 4: 6). Taura izvi nechisimba chitsvene:
65. “Moto weMweya Mutsvene, bika kusvibiswa pamweya kubva muropa rangu. (Kubvira kunonatsa mvura. Sezvo mvura painenge ichifashaira, hutsi hunogwamba hugoita mvura yakachena.). Itai izvi kamwechete uye dzokororai, “Moto weMweya Mutsvene zvidzivire.”
66. Ini ndinozvisunungura kubva muchibvumirano chose cheropa raSatani, muzita raJesu.
67. Bata musoro wako nemaoko ako maviri uye unamate zvine hukasha, “Ndinosunungura musoro wangu kubva kuzvibvumirano zvesimba zveropa, muzita raJesu.
68. (Ndichiri kubata musoro wako nemaoko ako maviri,) "Ndinobvisa nhare dzose dzezvibvumirano zvakaipa, muzita raJesu."
69. Kana mumwe munhu apinda muchibvumirano chakaipa, anotukwa. Sezvo iye ari kutyora chibvumirano, anoripiswa nezvinhu zviviri zvakasiyana: sungano uye kutukwa. Saka, namata seizvi; "Ndinozvisunungura kubva pakutuka kwese kwandakaita, muzita raJesu."
70. Ropa raJesu, taura zvinopesana nechero yakaipa sungano yakaipa.
71. Ndinotaura kuparadzwa kune michero yemweya yetsvina muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
72. Ndinotyora chibvumirano chese chishuvo chakaipa, muzita raJesu.
73. Ini ndinobvisa nhare dzose dzezvibvumirano zveropa rakaipa, muzita raJesu.
74. Ndinobvisa zvinokonzereswa nehuipi kuwana muropa rangu, muzita raJesu.
75. Ndinozvisunungura kubva pakutukwa kwese kwakaitwa, muzita raJesu.
76. Ini ndinosunungura chero nhengo mumuviri wangu kubva mukubatwa kwesungano yeropa rakaipa, muzita raJesu.
77. Ndinozvibvisa ini nemhuri yangu kubva pasungano yega yega yeropa, muzita raJesu.
78. Ndinozvibvisa pane imwe nyika yerudzi rwechibvumirano, muzita raJesu.
79. Ndinozvibvisa pane imwe neimwe yakagara nhaka ropa ropa, muzita raJesu.
80. Ndinobvisa ropa rangu kubva kuatari yese yakaipa, muzita raJesu.
81. Ndinobvisa ropa rangu kubva kubhanga reropa raSatan, muzita raJesu.
82. Ndinotyora chibvumirano cheropa rakaipa risingazivi, muzita raJesu.
83. O Ishe, regai ropa re chero mhuka yakadeurwa panzvimbo yangu isunungure simba resungano, muzita raJesu.
84. Kudonhedza kweropa kwese, kutaura zvakaipa pamusoro pangu, kunyarara neropa raJesu.
85. Ini ndinozvisunungura kubva mumubatanidzwa wesungano yeropa pamwe chete, muzita raJesu.
86. Ndinozvisunungura kubva pane yega yega kana kusaziva zvakaipa zvakaipa ropa, muzita raJesu.
87. O Ishe, rega ropa rekuti chero sungano yakaipa risunungure simba raro pamusoro pangu, muzita raJesu.
88. Ndinoshora nekuparadza chibvumirano chose chakaipa chesungano, muzita raJesu.
89. Ropa rezvibvumirano zvitsva, taura zvinopesana neropa rekuti chero chibvumirano chakaipa chakasangana neni, muzita raJesu.
90. Ini ndinogashira, iyo mvumo, yekukanganisa kodzero yezvose zvisungo zveropa, muzita raJesu.
91. Sangano rega rega reropa rakaipa, rakaumbwa ne chero nhengo yemuviri wangu, rakavezwa, neropa raJesu.
92. Ini ndinopora, zvinhu zvese zvakanaka zvakabiwa kubudikidza nezvibvumirano zvakaipa nevavengi, muzita raJesu.
93. Sangano rega rega reropa rakaipa, pamwe nerangu reropa, ngariverengerwe, muzita raJesu.
94. Ndinozvisunungura kubva mukutuka kwese, kwakabatirirwa pazvibvumirano zvakaipa, muzita raJesu.
95. Ndinozvisunungura kubva pamusungo wevatuki-vesungano-mvumo, muzita raJesu.
96. Kudzokorodza kwese kwekuputsa zvibvumirano zvausingazivi, kusukwa neropa raJesu.
97. Chero zvirevo zvemadzitateguru angu zvinopesana neupenyu hwangu, Ndinozvizivisa zvisina basa uye zvisina tariro muzita raJesu.
98. Chero masimba masimba euroyi nemweya yemhuri, anoshanda achirwisa hupenyu hwangu, aparadzwe nemoto muzita raJesu
99. Chero simba rakaipa remasimba ekudzora masimba, richishandura maitiro angu, riparadzwe nemoto muzita raJesu.
100. Baba, ndinokutendai nekupindura munamato wangu, uye nekundisunungura ini nemhuri yangu nekusingaperi muzita raJesu. (Imba nziyo dzerumbidzo nekutenda Ishe Jesu).
Previous nyayaKuteterera Munamato Usati Waparidza Izwi raMwari
inotevera60 minamato yemazuva ese yekutungamira kweHumwari
Simon mubikayi Gumiguru 26, 2020 Na12: 07 pm
Je remercie Dieu de m'avoir conduit sur cette saiti ça ma beaucoup révèle kana temps des choses que Dieu bénisse le pasteur
Meredith. Meredith Chivabvu 7, 2021 nenguva dza 2:47 pm
Bedanm voor de sterkte gebeden. Elke keer als ik deze gebeden bid. Moet ik yakanyanyisa. Komt allemaal spuug en slijm uit mij.
Iden een teken?
Siya A Reply to Meredith. Meredith kukanzura mhinduro
Kunamata Kunongedzera Kumutsidzira Roorano Yevanorwara
12 Yekunamata Points YeRusununguko
Kunamata Points Kupokana Kukundikana muna 2021